Indawo yokuhlala yomlando "Thalerhof" enkabeni yeLana - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yomlando "Thalerhof" enkabeni yeLana
Lana, Trentino-Alto Adige, i-Italy
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-Familie Egger
U-Familie Egger Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Nov 22.
Lesi sakhiwo sokuhlala esikhethekile saqala ukushiwo ngokubhala ngo-1333. "I-Thalerhof" itholakala esikhungweni esingokomlando saseLana, phakathi nendawo edumile yabahamba ngezinyawo, amakhilomitha ambalwa ukusuka eMerano. Egumbini elingaphansi komhlaba kukhona imnyuziyamu ye-"Moorlärche" (i-marsh larch). Endaweni eseduze kunezindawo ezimbalwa zokudla kwasekuseni, amakilabhu, amabha, izindawo zokudlela, izitolo, izithuthi zomphakathi kanye nezindlela eziningi zokuchitha usuku emvelweni.
Indawo yokuhlala isilungiswe kancane, sijabule kakhulu ukuthi manje izivakashi zethu zingajabulela le ndawo enhle nengavamile. Igumbi elinemibhede engamawele lakhiwe kabusha ngokuphelele futhi lafakwa ukuze kuvunyelwe izivakashi zethu ukuba zithole lesi senzo sothando phakathi kwakudala nesimanje.
ubusuku obungu-7 e- Lana
Sinikeza ithuba lokupaka imoto yakho futhi ukhiye amabhayisikili akho. Indawo imaphakathi kakhulu futhi iyaphila, kodwa endlini kuthule kakhulu futhi kunokuthula. Izivakashi zethu zijabulela ubumnandi obugcwele amamitha ambalwa nje ngezinyawo futhi ngesikhathi esifanayo nobuningi bobumfihlo.
Ibungazwe ngu-Familie Egger
Sihlale sitholakalela imibuzo emayelana namasiko, imvelo kanye nezipesheli zokungcebeleka. Izincwajana zokuvakasha, imigwaqo kanye nezindawo ezithakazelisayo zingatholakala ekamelweni.
Samukela zonke izivakashi zethu lapho zifika futhi zinikeze lonke ulwazi oludingekayo esizeni.
Sihlale sitholakalela imibuzo emayelana namasiko, imvelo kanye nezipesheli zokungcebeleka. Izincwajana zokuvakasha, imigwaqo kanye nezindawo ezithakazelisayo zingatholakala ekamelw…
UFamilie Egger Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Lana namaphethelo